ISwitzerland ifuna ukusindisa izinguzunga zeqhwa ekushiseni komhlaba | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Njengoba inomphetho omude wempumulo, i-Morteratsch Glacier eSwitzerland ingenye yezindawo ezivakashelwa kakhulu ezweni, kepha futhi ingenye yezindawo ezisengozini kakhulu emazingeni okushisa anyukayo. Minyaka yonke ulahlekelwa ngamamitha angama-30 kuye kwangama-40Ngakho-ke uma kungenziwa lutho kungenzeka kusheshe kudlule.
Ukugwema lokhu, basungule indlela yokukuqinisa: Imishini yeqhwa engu-4.000 izosebenzisa amanzi asemachibini akhiwe ngenxa yokuncibilika ukudala iqhwa, elizosetshenziselwa ukumboza ingxenye engenhla yeqhwa. Kuzokwanela?
Ngokuya ngezifundo zangaphambilini, ososayensi bakholelwa ukuthi uMorteratsch angalulama amamitha ayi-800 eminyakeni engama-20. Kepha ukwazi ukuthi kuyasebenza ngempela, into yokuqala abazoyenza ukusebenzisa le ndlela engxenyeni encane yeqhwa leDiavolezzafirm kuleli hlobo (2017). Iphrojekthi yokuqala izobiza cishe ama- $ 100.000, kusho ososayensi Usosayensi.
Uma imiphumela mihle, ochwepheshe bathi kunganele ukuvikela indawo engamakhilomitha-skwele angu-0,5 ngoqweqwe oluncane lweqhwa lokufakelwa elingamasentimitha ambalwa ukujiya kweMorteratsch. Noma kunjalo, asikwazi ukukhohlwa ukuthi umphumela omkhulu weqhwa ukukhombisa ukukhanya kwelanga.
Uma imisebe yelanga iqonde ngqo, ngeke nje kuphela izinga lokushisa liphakeme, kodwa neqhwa, elimhlophe, liyoncibilika ngokushesha.. Lokhu yilokho okwaziwa njengomphumela we-albedo, futhi singakuhlola ngokuthatha ukhilimu lolly ebusika futhi futhi omunye ehlobo. Ngenkathi ebusika kungathatha uhhafu wehora noma ngaphezulu ukuncibilika, ehlobo uyikhiphela ngaphandle bese iqala ukuncibilika ngokushesha.
Uma iplanethi iqhubeka nokufudumala, izinguzunga zeqhwa zazingabalwa izinsuku zazo. Futhi uma zinyamalala, amazinga olwandle azokhuphuka emhlabeni wonke, kubangele izinkinga eziningi kuwo wonke umuntu ohlala ogwini naseziqhingini eziphansi.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » ISwitzerland ifuna ukusindisa izinguzunga zeqhwa ekushiseni komhlaba